Author Topic: Karishma Manandhar - Photos and profile (Read 142824 times)
« Reply #70 on: June 11, 2013, 11:07:00 AM »
« Reply #71 on: June 18, 2013, 11:17:14 AM »
« Reply #72 on: June 18, 2013, 11:18:06 AM »
« Reply #73 on: June 21, 2013, 11:27:34 AM »
« Reply #74 on: June 24, 2013, 01:12:42 PM »
« Reply #75 on: June 27, 2013, 01:32:49 PM »
« Reply #76 on: August 02, 2013, 07:22:10 PM »
« Reply #77 on: February 24, 2015, 12:50:22 AM »
गोपीकृष्णसँग टुट्यो करिश्माको साथ !
काठमाण्डौ, २०७१ फाल्गुन १०, अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरलाई १२ बर्षपछि फिल्म निर्माणमा फर्कदा सुरुवातमै झट्का लागेको छ । करिश्माले सहकार्य गर्ने भन्दै उद्घोष गरेको गोपिकृष्णसँग उनको साथ टुटेको छ ।
काठमाण्डौमा ठूलै तामझामका साथ घोषणा गर्दा करिश्माले आफूहरुले गोपिकृष्ण मुभिजसँग सहकार्य गर्न लागेको बताएकी थिइन् । गोपिकृष्णले विभिन्न निर्माताहरुसँग सहकार्य गर्दै निर्माण गर्न लागेको ७ वटा फिल्म मध्ये करिश्माको 'फागु' पनि थियो । यो सहकार्य फिल्म छायांकन नसकिने बेलासम्म पनि टिक्न सकेन ।
आखिर किन त ? करिश्माले भनिन्– ‘हामी आँफै सक्षम भयौं त्यसैले गोपिकृष्णसँग यो पटक एकसाथ काम गर्न नसकिएको हो । उनले कथावस्तुमा पनि केही परिवर्तन गरेका कारण पनि गोपिकृष्णसँग सहकार्य हुन नसकेको तर्क सुनाईन् । करिश्माले भविष्यमा भने गोपिकृष्णसँग काम गर्न सकिने बताएकी छिन् ।
यो फिल्मसँग गोपिकृष्ण मुभिज अलग हुनुको पछाडि निर्देशक सम्झना उप्रेती रौनियार रहेको बुझ्नमा आएको छ । श्रोतका अनुसार सम्झनाकै कारणले करिश्माले गोपिकृष्णसँगको साथ छाड्नु परेको हो । फिल्म नगरीमा फिल्मकर्मीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन नसक्ने सम्झना गोपिकृष्णसँगको सहकार्यकी मुख्य वाधक बनेको श्रोतको दाबी छ ।
गोपिकृष्ण मुभिजको ब्यानर लिएर करिश्माले बनाउन लागेको फिल्म 'फागु'को हाल बिरगञ्जमा छायांकन भैरहेको छ । यो फिल्ममा राजेश हमाल, गौरी मल्ल, शिल्पा पोखरेल, सुवास पराजुली, टीका पहारी, बसन्त भट्ट लगायतको अभिनय छ ।
« Reply #78 on: March 17, 2015, 01:21:27 AM »
November, 2007 article about राजीव श्रेष्ठ and his struggle in photography
मुर्म्बईबाट टे्रनिङ सकेर काठमाडांै त आए तर दमदार पोज दिने व्यक्ति थिएन । पहिलो झमटमै झकास फोटो खिचेपछि मात्रै चर्चामा आइन्छ भन्ने लागेको थियो राजीव श्रेष्ठलाई । चर्चामा आउनका लागि तरुनीको फोटो खिच्नैपर्ने बाध्यता थियो । राजीवको जस्तै सोच पालेर बसेकी थिइन् अर्की युवती करिश्मा केसी पनि । सिनेमामा मौका पाउनका लागि काठमाडौंको सडक नापिरहेकी करिश्मालाई ग्ल्यामर फोटो खिच्यो भने सिनेमामा मौका पाइएला कि भन्ने झिनो आस थियो । तर, आफूले भनेजस्तै ग्ल्यामर फोटो खिचिदिने व्यक्ति भेटेकी थिइनन् ।
संयोग पनि गज्जबले जुर्‍यो । राजीव र करिश्माको भेट मात्रै भएन, दुवैले मन फुकाएर काम गरे । १८ वर्षघि खिचेको करिश्माको फोटो देखाउ“दै राजीव भन्छन्, 'करिश्मा वास्तवमै करिश्मा हो, उनको जस्तो उज्यालो चेहरा अरूको देखेकै छैन ।'
राजीवले औपचारिक फोटो सेसन करिश्माबाटै सुरु गरेका थिए । फोटोको प्रसंग आउनेबित्तिकै करिश्माको नाम लिन भुल्दैनन् । त्यसो त करिश्माले पनि राजीवस“गको सम्बन्ध ज्यु“कात्यु“ राखेकी छिन् । हरेकपटक अमेरिकाबाट फर्किएको तीन दिन नबित्दै राजीवको स्टुडियोमा पुगिहाल्छिन् फोटो सेसनका लागि । नेपालका सबै हिरोइनलाई क्यामेराबाट हेरिसकेका राजीव करिश्माले दिने पोज अरू हिरोइनले दिन सक्दैनन् भन्छन् ।
पहिलोपटक करिश्माको छातीमा ट्युब बा“धेर फोटो खिचेका थिए राजीवले । जुन फोटो पत्रिकामा छापिएपछि त राजीव र करिश्मा को भन्दा को कम जस्तै भए । दुवैलाई भ्याइनभ्याई हुन थाल्यो । राजीव भन्छन्, 'त्यतिबेला छातीमा ट्युब र प|mक लगाएर खिचेको फोटोले मस“गै करिश्मालाई पनि चिनायो ।'
टुपिस फोटो हेरेर ज्रि्रो काढ्ने मान्छे अहिले पनि भेटिन्छन् । राजीवले डेढ दसकअघि नै टुपिसमा फोटो सेसन गरेका थिए । करिश्माकै कारण त्यो सम्भव भएको बताउ“छन् राजीव । उनको बुझाइमा करिश्मा एक जुझारु र उदार हिरोइन हो । अंग पर््रदर्शन गर्न नसक्ने र बेडसिन दिन लजाउने केटी हिरोइन बन्न सक्दिन भनेर करिश्मा त्यतिबेलै राजीवस“ग त हाकाहाकी भन्थिन् रे ।
ग्ल्यामर फोटोग्राफीमा मज्जैले जमेका राजीवले आमहिरोइनलाई टुपिसमा नियालेका छन् । तर, करिश्माका अगाडि अरू सबै फिक्का लाग्छन् । टुपिस फोटोका विषयमा बेलाबेलामा विवाद पनि हुन्छ । तर, राजीवलाई सामान्य लाग्छ यस्ता विवाद । टुपिस फोटो समयको माग हो भन्ने लागेको छ उनलाई । उनी भन्छन्, 'मैले कसैको पनि जबर्जस्ती फोटो खिचेको छैन । जति खिचें युवतीको रोजाइमै खिचिएको हो ।' फोटो खिचिसकेपछि बेकारमा खिचिएछ भन्नेहरूदेखि भने दिक्क लाग्छ उनलाई । उनीकहा“ फोटो खिच्न आउनेमध्ये कतिपयले पत्रिकामा छापिदिनसमेत प्रस्ताव राख्छन् । तर, त्यही फोटो पत्रिकामा छापिएपछि किचकिच गर्नेहरू पनि छन् । 'पहिला खुसी भएर फोटो सेसन गराउ“छन् । पत्रिकामा छापिने बेलासम्म ती मोडलको लभ परिसक्दोरहेछ, ब्वाइप|mेन्डले किन छापेको भनेपछि मस“ग कराउने पनि छन्,' उनले भने ।
क्यामेरा चलाएरै दुइ दसक बिताएका राजीवले मेलिना मानन्धर, रूपा उपाध्याय र यमुना उप्रेतीलाई हिरोइन बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् । ती सुन्दरीले राजीवले खिचेको फोटो देखाएकै भरमा सिनेमामा स्थान पाएका हुन् । नेपालका आमसुन्दरीलाई अर्धनग्न बनाएर क्यामेराबाट नियालेका राजीवलाई सुन्दरीको छेउमा उभि“दा कस्तो लाग्छ त - उनी भन्छन्, 'म अरू कुरामा ध्यान नै दिन्न, म त कवल उनीहरूको ब्युटिनेस क्यामेरामा कैद गर्न केन्द्रित हुन्छु ।' हा“सी-हा“सी सुन्दरीहरू उनका अगाडि अर्धनग्न भए पनि नाङ्गो फोटो खिचिदिनुस् भन्नेहरू अहिलेसम्म भेटेका छैनन् राजीवले । सेसनको क्रममा चारजना सुन्दरीको त 'ब्याक ओपन' फोटो भने खिचेका छन् उनले ।
अभिनेत्रीभन्दा नेपाली मोडल स्ट्यार्न्र्डड भएको बुझाइ छ उनको । फोटो खिच्नमा पनि हिरोइनको भन्दा मोडलकै सजिलो हुन्छ भन्छन् । मिस नेपाल झरना बज्राचार्य, माल्भिका सुब्बा, अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर र मोडल नोयो सिंहस“ग काम गर्न निकै सजिलो हुन्छ उनलाई । 'उनीहरू क्रिएटिभ छन्, फोटो कसरी राम्रो बनाउने आफंै पनि मेहनत गर्छन्,' उनले भने । तर, अभिनेत्री रेखा थापाको नखरा भने आफूलाई मन नपर्ने बताए । चर्चामा आउनुअघि नै रेखाको फोटो खिचेका राजीवले त्यसपछि रेखाको अगाडि क्यामेरा तेर्स्याएका छैनन् ।
फोटो खिचिसकेपछि चर्चामा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने राजीवको फोटो हेरेर प्रतिक्रिया दिनेहरूमा गैरकलाकर्मी पनि उत्तिकै छन् । पत्रिकामा छापिएको ग्ल्यामर फोटो हेरेर पिके पढ्ने युवतीले कतिपटक त स्टुडियोमै आएर 'यो त अति भो' भनेका छन् । आफूले खिचेको फोटो हेरेर प्रतिक्रिया दिनेहरू देख्दा रमाइलो लाग्छ रे उनलाई ।
« Reply #79 on: March 22, 2015, 11:52:47 PM »